यसरी राँगाको पेटमा जि’उँदै बच्चालाई हा’लेपछी जे भयो….तुरुन्त हेर्नुस् ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/यसरी राँगाको पेटमा जि’उँदै बच्चालाई हा’लेपछी जे भयो….तुरुन्त हेर्नुस् !
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ कि राँगाको पेटमा पनि बच्चा हा’लिन्छ भन्ने सुन्दा । तर यो साँचो हो । पुर्वी रुकुममा का टे को राँगाको पेटमा जि’उँदो बच्चा हाल्ने एउटा अनौठो चलन छ । त्याहाँका मानिसहरु यस्लाई रैथाने उपचार विधिको रुपमा चल्तीमा चलाई रहेका छन् । रुकुम पूर्वका स्थानीय बासिन्दाले वर्षौँदेखि विश्वासका साथ प्रयोग गर्दै आइरहेको यो उपचार विधि धेरैलाई अनौठो लागे पनि यहाँ भने सामान्य र नियमित रहेको छ ।
रोग निको हुन्छ भन्ने जनविश्वासमा का’ टे को राँगाको पेटमा जि’उँदो बच्चा हाल्ने परम्परा रहेको हो । नेपालका प्रायः धेरै क्षेत्रमा उपचारका घरेलु विधिहरु आ–आफ्नै तरिकाका हुन्छन् । स्थानीय रहनसहन, मूल्य, मान्यता र चलनले पनि ती विधिहरु विद्यमान देखिन्छन् । रुकुम पूर्वमा चलिआएको का’ टे को राँगाको पेटमा बच्चा पसाउने विधि भने रोग निको हुने जनविश्वासका साथ प्रचलनमा छ ।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १० का प्रथम घर्तीमगर सुकेनास, रुन्चे जस्ता रो’ग लागेर अस्वस्थ भइरहने बच्चालाई का’टे को राँगाको पेटभित्र छि’राइ ह’ ल्ला एर निकालेपछि निको हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार दशैँमा राँगा का टे पछि पेटबाट अलिकति लादी निकालेर केही समयका लागि बच्चालाई भित्र छि’रा’एर ह ल्ला उने गरिन्छ । यसरी बच्चालाई राँगाको पेटभित्र छिराएर निकालेपछि रो’ग निको हुने विश्वास गाउँलेहरुको छ ।
यस्तो चलन दशैंको बेला मात्र चलाउने परम्परा रहेको छ पुर्वी रुकुममा । त्याहाँ दशैंको बेलामात्र बच्चालाई राँगाको पेटभित्र छि रा एर निकाल्ने चलन छ । दशैँमा ब लि दिइने राँगा का’ टे पछि मात्र बच्चालाई पेटमा हा लेर निकाल्ने गरिन्छ । यो बेला विशेष शक्ति प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ ।
६ देखि १८ महिनासम्मको बच्चालाई यसरी राँगाको पेटभित्र हा लेर निकालिने गरिन्छ । पहिला अस्वस्थ बच्चालाई मात्र उपचार गर्न का’ टे को राँगाको पेटभित्र हाल्ने गरिन्थ्यो तर अहिले स्वस्थ बच्चा अझ निरो’गी र बलियो हुन्छ भन्ने विश्वासले एक पटक राँगाको पेटभित्र हाल्नैपर्छ भन्ने स्थानीयको विश्वास छ । वर्षौदेखि चलिआएको यो चलनको वैज्ञानिक कारण भने कसैलाई थाहा छैन । यो रुढीवादी परम्परा भए पनि निरन्तरता दिइएको स्थानीय शिक्षक राजधन घर्तीमगर बताउँछन् ।
शिक्षक घर्तीका अनुसार पुरानो पुस्तामात्र होइन आजको नयाँ पुस्ताले पनि यो पुरानो चलनलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिइरहेको बुुझिन्छ । बच्चालाई राँगाको पेटबाट निकालेर नजिकैको पानीको मूलमा लगेर नुहाइन्छ । यसलाई उनीहरु बच्चा चोख्याएको भन्छन् । यसो गर्दा रो’ग, का ल, क ष्ट सबै बगेर जाने उनीहरुको विश्वास छ ।
यो पनि विद्यालयस्तरको खगोल विज्ञानसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले दुई वटा अवार्ड हात पारेको छ । यस वर्ष सञ्चालित ‘ग्लोबल ई–कम्पिटिसन अन एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स’मा नेपालका लागि सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतिघरका राहुल रञ्जन साह र क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कोटेश्वरका अंशुराज सेढाईले अनरेबल मेन्सन अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् ।
नेपालका तर्फबाट सुरेश भट्टराईको नेतृत्वमा सम्मिलित टोलीमा नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाईटीको तर्फबाट मेन्टरका रुपमा संस्थाका परियोजना संयोजक तथा निर्देशक मनिषा द्वा, संस्थाका असोसियट सदस्य तथा पूर्व ओलम्पियाड प्रतियोगीहरु विजयचन्द्र लु’ईटेल र अंकित वेन्जु श्रेष्ठ सामिल थिए ।
असोज ९ गते सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता कार्तिक ७ गते समापन गरिएको थियो । व्यक्तिगत तथा सामुहिक गरी दुई विधामा संचालित प्रतियोगितामा नेपालले व्यक्तितर्फ दुई अवार्ड हात पारेको हो । प्रतियोगितामा नेपाल लगायत ४० देशका व्यक्तिगततर्फ २७९ तथा सामूहिकतर्फ १५४ बाढीले भाग लिएका थिए ।
नेपालबाट सातौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडबाट छनौट भएका १४ विद्यार्थी प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको हो ।
कोभिड–१९ को कारण कोलोम्बियामा हुने भनिएको चौधौं इन्टरनेसनल ओलम्पियाड अन एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स् २०२१ का लागि सारिएसँगै यस वर्ष विद्यार्थीहरुको मनोबल उच्च राख्न तथा यो विषम परिस्थितिमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्थरको गतिविधि कायम गर्ने प्रयास स्वरुप ईन्टरनेसनल ओलम्पियाड अन एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्सको संचालक समितिले ईस्टोनियाको सरकार तथा विज्ञहरूको अनलाइन प्रतियोगिता गराइने अनुरोध पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड नेपालमा अध्ययनरत कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत २० वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरुका लागि संचालित एक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम हो । सन् २०१४ देखि नेपालमा संचालित यस प्रतियोगितामा सामेल विद्यार्थीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिई पदक तथा अवार्ड प्राप्त गरेर देशभित्र र बाहिर उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भई उत्कृष्ट प्र’दर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
अब आठौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडको आवेदन छिटै खोलिने बताइएको छ । आवेदन तथा थप जानकारी www.nepalastronomicalsociety.org/olympiad मा छिट्टै उपलब्ध हुने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाईटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । अनलाइन खबर बाट
मनै रुवाउँने कुलमान घिसिङको जीवनी: सारा नेपालीले हेर्नैपर्ने भिडियो
न आफन्त न कोही मलामी न कोही आए , महिला एक्लैले गरिन पतिको अन्तिम संस्कार !
Breaking:आज पनि घट्यो नसोचेको दामले सुनको मूल्य।नया मूल्य कायम हुँदै खुसीको खबर ग्राहकवर्गलाई,पूरा पढ्नुहोस्